Izindaba - I-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
I-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Lokhu kungukunqoba kwamazwe amaningi nokuhwebelana ngokukhululeka. Ubhadane selusabalele umhlaba wonke, ukuhwebelana kwamazwe omhlaba kanye nokutshalwa kwezimali kwehle kakhulu, ukuthengwa kwezinkampani zezimboni kuvinjelwe, futhi ukuhwebelana kwembulunga yonke kwezomnotho kuhlangabezane nesikhathi esiphikisayo, futhi ubumbano kanye nokuvikelwa kuye kwanda. Onke amalungu e-RCEP enze ukuzibophezela ngokuhlanganyela ekwehliseni imali ekhokhwayo, ukuvula izimakethe, ukunciphisa izithiyo, nokuxhasa ngokuqinile ukuhwebelana kwembulunga yonke. Ngokuya ngesibalo sethangi lokucabanga lamazwe omhlaba, i-RCEP kulindeleke ukuthi inyuse ukwanda kwenani lama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-519 e-USA kanye nama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-186 emholweni wezwe minyaka yonke ngonyaka ka-2030. Ukusayinwa kwe-RCEP kukhombisa ngokuphelele isimo esisobala sawo wonke amaLungu Izizwe ngokumelene nobumbano kanye nokuvikela. Izwi elihlangene lokuxhasa ukuhweba kwamahhala nohlelo lokuhweba lwamazwe amaningi lufana nokukhanya okukhanyayo ku-haze kanye namandla afudumele emoyeni obandayo. Kuzothuthukisa kakhulu ukuzethemba kwawo wonke amazwe entuthukweni futhi kufake amandla akhayo ekubambisaneni nobhubhane lwamazwe omhlaba kanye nokubuyiselwa kwezomnotho emhlabeni.
Ukusheshisa ukwakhiwa kwenethiwekhi yendawo esezingeni eliphezulu yokuhweba mahhala
I-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), eqalwe amazwe ayishumi e-ASEAN, imema iChina, iJapan, iSouth Korea, i-Australia, iNew Zealand kanye ne-India ukuthi babambe iqhaza (“10 + 6 ″).
"Isivumelwano Esibanzi Sokubambisana Kwezomnotho" (i-RCEP), njengesivumelwano sokuhweba esifundeni sase-Asia-Pacific, nakanjani sizokhiqiza umphumela omkhulu wezohwebo. Ukugxila embonini yokukhiqiza yomhlaba, imodeli ye-GTAP isetshenziselwa ukulingisa umthelela we-RCEP ekwahlukanisweni kwabasebenzi embonini yezokukhiqiza emhlabeni, futhi kutholakala ukuthi i-RCEP inomthelela omkhulu ekwahlukanisweni kwabasebenzi embonini yezokukhiqiza emhlabeni. Ukuqedwa kwalo kuzophinde kuthuthukise isikhundla sesifunda sase-Asia emhlabeni; I-RCEP ngeke ikhuthaze ukukhiqizwa kwamaShayina kuphela Ukwandisa ukuthunyelwa kwangaphandle kwezimboni nokwanda kwesabelo semakethe yomhlaba nakho kulungele ukukhuphuka kuketango lwamanani omhlaba.
Ukubambisana kokuhlanganiswa komnotho esifundeni okuholwa yi-ASEAN kuyindlela yenhlangano yokuthi amazwe angamalungu avule izimakethe komunye nomunye futhi asebenzise ukuhlanganiswa komnotho wesifunda.
Ngokunciphisa izintela nezithiyo ezingakhokhi intela, sungula isivumelwano sokuhweba samahhala nemakethe enobunye yamazwe ayi-16
I-RCEP, umbono omuhle, futhi iyingxenye ebalulekile yecebo lezwe lami, futhi singalinda nje sibone!